बाँके र बर्दियामा कोरोना संक्रमित थपिने क्रम रोकिएन – Merokhushi
बाँके र बर्दियामा कोरोना संक्रमित थपिने क्रम रोकिएन
भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डे, एभरेष्ट बैंक नेपालगन्जका दुई कर्मचारी र वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जका एक प्रहरीलगायत संक्रमित
मेरो खुसी । ९ भाद्र, २०७७ मंगलवार १६:४७ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज : कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेको बाँके र बर्दियामा संक्रमित थपिने क्रम रोकिएको छैन ।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन खुलेयता दैनिक रुपमा संक्रमित देखिन गरेको पाईएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार बाँकेका ८ र बर्दियाका ६ जना गरी थप १५ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
पछिल्लो समय देखिएका संक्रमितहरुमा भेरी अस्पताल नेपालगन्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डे, एभरेष्ट बैंक नेपालगन्जका दुईजना कर्मचारी र वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जका एक प्रहरी कर्मचारीलगायत रहेका छन । योसंगै बाँकेमा कुल संक्रमितको संख्या ८ सय ४३ पुगेको छ जसमध्य १ सय ८६ जना आइशोलेसनमा रहेका छन भने ६ सय ५४ जना कोरोना जितेर घर फर्कि सकेका छन । जिल्लामा हालसम्म कुल ४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ ।
त्यस्तै मंगलबार बर्दियामा पनि ६ जना संक्रमित थपिएका छन । स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरीका अनुसार जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका चारजना, राजापुर नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिका एक÷एक जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । जिल्लामा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या ३ सय २६ पुगेको छ । जसमध्य २ सय ६५ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किसकेका छन भने ६० जना आईशोलेसनमा रहेका छन । कोरोनाका कारण बर्दियामा एक जनाको ज्यान गएको छ । चार महिना लामो लकडाउन खुलेसंगै दैनिक रुपमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा बाँके र बर्दियामा कोरोनाको जोखिम कायमै छ ।